ChildFirst ™ - Caymiska Caafimaadka Deegaanka ee Gobolka Washington - CHPW
Bogga ugu weyn > Faa'iidooyinka + > ChildrenFirst ™
Sii carruurtaada bilaw caafimaad oo wanaagsan, oo hel kaararka hadiyadaha ah ee ay ku qarash gareeyaan qoyskaaga.
Ilaalinta caafimaadka qoysaska
Xubnaha Caafimaadka Beesha ee Washington (CHPW) xubnuhu way heli karaan abaalmarinta kaarka hadiyadaha ee baaritaannada dhalmada ka hor, dhalmada ka dib, iyo baarista ilmaha wanaagsan iyada oo loo marayo Barnaamijkeena ChildrenFirst.. Abaalmarinta kaarka hadiyaddaada waxaa lagu isticmaali karaa Amazon, Safeway, ama Target.
Booqashooyinka dhakhtarka caadiga ah iyo baaritaanka dhalmada ka hor waxaa lagu daboolaa CHPW. Jadwalka booqashooyinkan maanta waxay wax weyn ka beddeli kartaa caafimaadka ilmahaaga sannadaha soo socda:
Booqashooyinka dhalmada ka hor adiga iyo dhallaankaaga ammaan ka dhig adiga oo hore u qabta dhibaatooyinka iman kara.
Dhalmadu waxay beddeli kartaa jirkaaga waxayna ku yeelan kartaa saamayn muddo dheer ah caafimaadkaaga. Booqashooyinka dhalmada kadib hubi inaad caafimaad qabto dhalmada kadib.
joogtada ah baaritaannada ilmaha wanaagsan ku siinayo fursad aad ku barato dhakhtarkaaga. Waxaad ka wada hadli kartaa walaacyada aad qabto, baran kartaa waxa aad filan karto marka ilmahaagu korayo, oo aad hubiso arrimaha caafimaadka ee laga hortegi karo.
Isku qor khadka tooska ah Us Wac
$ 100 kaararka hadiyadda ah ee booqashooyinka dhalmada ka hor (dheef la hagaajiyay)
Daryeelka dhalmada ka hor ayaa muhiim u ah adiga iyo ilmaha caafimaadka qaba. Waxaad ka heli kartaa $ 100 oo kaararka hadiyadda ah haddii aad aragto dhakhtarkaaga inta aad uurka leedahay.
Baro sida loo helo abaalmarinta dhalmada kahor ➜
$ 50 kaarka hadiyadda ee baaritaanka dhalmada kadib (Cusub)
Hel a $ 50 kaarka hadiyadeed markaad booqato dhakhtarka 1 ilaa 12 toddobaad kadib markaad dhasho.
Baro sida loo furto kaarkaaga hadiyadda ah $ 50 ➜
$ 20 kaararka hadiyadda ee baaritaan kasta
Haddii ilmahaagu ka tirsan yahay CHPW, waxaad heli kartaa a $ 20 kaarka hadiyadeed mar kasta oo ilmahaagu u galo baaris caafimaad oo wanaagsan ilaa ay ka gaaraan 18. Taasi waa 27 baaritaan iyo 27 kaararka hadiyadda ee ilmo kasta, ama faa'ido dhan $ 540.
Baro sida loo helo kaararkaaga hadiyadda ➜
Soodejiso Jadwalkayaga Joogtada ah ee Cunugga oo ha moogaan booqasho
Kalandarka Baadhitaanka Ilmaha ee Fiican (Ingiriis)
Kalandarka Baadhitaanka Ilmaha ee Fiican (Isbaanish)
Kalandarka Baadhitaanka Ilmaha ee Fiican (Shiineys)
Kalandarka Baadhitaanka Ilmaha ee Fiican (Ruush)
Jadwalka Baadhitaanka Ilmaha ee Fiican (Soomaali)
Kalandarka Baadhitaanka Ilmaha ee Fiyetnaam ah
Mashiinka Naasaha oo Bilaash ah
Dalbo bamka naaska gacanta ama koronto. Bamka naaskaaga oo lacag la'aan ah ayaa laguugu keenayaa gurigaaga oo lacag la'aan ah.
Baro sida loo helo bamka naaskaaga ➜
CHPW waxay ku bixisaa $ 200 kharashka guditaanka.
Waxbadan ka baro caymiska gudniinka ➜
Uur leedahay ama ka fekereysaa inaad uur yeelato?
Barnaamijka Caafimaadka Carruurta, Caafimaadka Ilmaha ee CHPW wuxuu bixiyaa taageero shaqsiyeed kahor, inta lagu jiro, iyo kadib uurkaaga.
Waxbadan ka baro barnaamijka Caafimaadkaaga, Caafimaadka Ilmaha ➜
Taariikhda Cusboonaysiinta Ugu Dambeysa: Sebtember 28, 2021